April 2019 - CeleLove
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ။ ဒီအတိုင်း ဆက်တက်နေရင် ၄၅-၄၇´C အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် တက်နှုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ယခက်က ၁´C တက်ဖို့ ၁၀ နှစ် ကြာပါတယ်။ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုငယ်သွားလိမ့်မယ်။ သက်သေပြပြီးသားပါ။ အခု ၃ နှစ် အတွင်း ၂`C တက်လာပါတယ်။ အပူချိန် ၁´C တက်လာတိုင်းပျမ်းမျှအသက် ၂ နှစ် လျော့စေပါတယ်။ု့သတိထားကြပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ပျမ်းမျှအသက်ဟာ ကျား ၅၃၊ မ ၅၇ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပူချိန် ၂´C တက်လာမှုကြောင့်၎ နှစ် ထပ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ စိုထိုင်းဆလည်း အရမ်းလျော့နည်းနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ တော်သေးတယ်လို့ပြောလို့ ရပေမယ့်အပူဒဏ်ပို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အစားအစာ၊ အနေအထိုင်သတိပြုကြပါ။ အအေးစာတွေက အပူစုပ်နိုင်ပေမယ့်အပူရှပ်ခြင်းကိုအဓိက ဖြစ်စေပါတယ်။ အရေးကြီးတာကနေပူထဲမှာနံက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတွင်းသွားလာ လှုပ်ရှားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ကြပါ။ ဗမာချည်သား အဝတ်ထူထူတွေကအပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အပူက ပြန်ရောက်လာစဉ်အဝတ်များ ချွတ်ခြင်း၊ ရေခဲရေသောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းတို့ ရှောင်ပါ။ ဆားနှင့် ရေသောက်ခြင်းကိုလည်းမပြုလုပ်ကြပါနဲ့။ အပူက ပြန်ရောက်စဉ် ၅ မိနစ်ခန့် ပြန်လာစဉ်ကအတိုင်း နေပေးကြပါ။ အဲယားကွန်းခန်းအတွင်း အဝင်အထွက် လုပ်ကိုင်သွားလာနေရသူများသတိပြုကြပါ။ အပူမှ ပြန်ရောက်ချိန်အဲကွန်းခန်းအတွင်းရုတ်တရက် ဝင်ရောက်ပါကခန္ဒာကိုယ်အရေပြားမှ သွေးများ ဗဟို သွေးလှည့်အဖွဲ့ထဲရောက်ရှိပြီးရုတ်တရက် သွေးပေါင်တက်ကာလေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲကွန်းခန်းထဲ ကြာရှည်နေရသူများအပူထဲသို ထွက်ချိန်မှာသွေးပေါင်ထိုးကျပြီးမူးဝေတတ်ပါတယ်။ ရေများများ သောက်ပါ။ အငန်/အချိုလျော့စားကြပါ။ ချွေးထွက်လွန်သူမှ လွဲ၍ဓာတ်ဆားရေ သောက်ခြင်း လျော့ပါ။ ဟင်းကျန်ထမင်းကျန်များ စားခြင်း ရှောင်ပါ။ ဟင်းကျန်များ နွေးရာတွင်ရေဖြည့်ထည့်၍ နွေးပါ။ လက်သုပ်များ လျော့စားပါ။ မိဘပြည်သူအများ ဘေးရန်ကင်းကွာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ Credit via wai wai Hlaing Via ချမ်းချမ်း ———————————- unicode အပူခြိနျအရမျးမွငျ့တကျနပေါတယျ။ ဒီနေ့ အပူခြိနျဟာ ၄၃ ´C အထိ တကျလာပါပွီ။ ဒီအတိုငျး ဆကျတကျနရေငျ ၄၅-၄၇´C အထိ ရောကျနိုငျပါတယျ။ အပူခြိနျ တကျနှုနျးတှကေိုလလေ့ာကွညျ့ရငျ ယခကျက ၁´C တကျဖို့ ၁၀ နှဈ ကွာပါတယျ။ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ပိုငယျသှားလိမျ့မယျ။ သကျသပွေပွီးသားပါ။ အခု ၃ နှဈ အတှငျး ၂`C တကျလာပါတယျ။ အပူခြိနျ ၁´C တကျလာတိုငျးပမျြးမြှအသကျ ၂ နှဈ လြော့စပေါတယျ။ု့သတိထားကွပါ။ မွနျမာတှရေဲ့ပမျြးမြှအသကျဟာ ကြား ၅၃၊ မ ၅၇ ဖွဈပါတယျ။ အခု အပူခြိနျ ၂´C တကျလာမှုကွောငျ့၎ နှဈ ထပျလြော့သှားနိုငျပါတယျ။ စိုထိုငျးဆလညျး အရမျးလြော့နညျးနပေါတယျ။ ဒီအခွအေနဟော တျောသေးတယျလို့ပွောလို့ ရပမေယျ့အပူဒဏျပို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အစားအစာ၊ အနအေထိုငျသတိပွုကွပါ။ အအေးစာတှကေ အပူစုပျနိုငျပမေယျ့အပူရှပျခွငျးကိုအဓိက ဖွဈစပေါတယျ။ အရေးကွီးတာကနပေူထဲမှာနံကျ ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတှငျးသှားလာ လှုပျရှားအလုပျလုပျကိုငျခွငျး ရှောငျကွဉျကွပါ။ ဗမာခညျြသား အဝတျထူထူတှကေအပူဒဏျကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ အပူက ပွနျရောကျလာစဉျအဝတျမြား ခြှတျခွငျး၊ ရခေဲရသေောကျခွငျး၊ ရခြေိုးခွငျးတို့ ရှောငျပါ။ ဆားနှငျ့ ရသေောကျခွငျးကိုလညျးမပွုလုပျကွပါနဲ့။ အပူက ပွနျရောကျစဉျ ၅ မိနဈခနျ့ ပွနျလာစဉျကအတိုငျး နပေေးကွပါ။ အဲယားကှနျးခနျးအတှငျး အဝငျအထှကျ လုပျကိုငျသှားလာနရေသူမြားသတိပွုကွပါ။ အပူမှ ပွနျရောကျခြိနျအဲကှနျးခနျးအတှငျးရုတျတရကျ ဝငျရောကျပါကခန်ဒာကိုယျအရပွေားမှ သှေးမြား ဗဟို သှေးလှညျ့အဖှဲ့ထဲရောကျရှိပွီးရုတျတရကျ သှေးပေါငျတကျကာလဖွေတျခွငျး၊ ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျခွငျးတို့ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲကှနျးခနျးထဲ ကွာရှညျနရေသူမြားအပူထဲသို ထှကျခြိနျမှာသှေးပေါငျထိုးကပြွီးမူးဝတေတျပါတယျ။ ရမြေားမြား သောကျပါ။ အငနျ/အခြိုလြော့စားကွပါ။ ခြှေးထှကျလှနျသူမှ လှဲ၍ဓာတျဆားရေ သောကျခွငျး လြော့ပါ။ ဟငျးကနျြထမငျးကနျြမြား စားခွငျး ရှောငျပါ။ ဟငျးကနျြမြား နှေးရာတှငျရဖွေညျ့ထညျ့၍ နှေးပါ။ လကျသုပျမြား လြော့စားပါ။ မိဘပွညျသူအမြား ဘေးရနျကငျးကှာ ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ။ Credit via wai wai Hlaing Via ခမျြးခမျြး
April 29, 2019 Cele Love 0
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ။ ဒီအတိုင်း ဆက်တက်နေရင် ၄၅-၄၇´C အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် တက်နှုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ယခက်က ၁´C တက်ဖို့ ၁၀ နှစ် ကြာပါတယ်။ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုငယ်သွားလိမ့်မယ်။ သက်သေပြပြီးသားပါ။ အခု […]
ယောကျာင်္း လေး တစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တစ်ကယ် ချစ်လား။ မချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ
ယောကျာင်္း လေး တစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တစ်ကယ် ချစ်လား။ မချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ ၁။ မျက်ခွက်ကို လက်ဝါး နဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ် ပြန် ညာ ပြန် ဆင့်တွယ်ကြည့်ပါ။ အား ပါ ပါစေ … (တစ်ချက်ကလေးမှတောင် ဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင် […]
အင်တာနက်မှာ သိကျွမ်းရုံနဲ့ အပြင်မှာတွေ့ဆုံဖို့ထိ သတ္တိကောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အတွေ့အကြုံ…
တစ်ချို့ မသင်္ကာစရာလူတွေကို ဖမ်းမိခဲ့ပေမယ့် တစ်ချို့ ကတော့ ရှောင်တိမ်းနေဆဲ အွန်လိုင်းကနေပဲ ချစ်ကြိုက်သွားကြတဲ့ ကြည်နူးစရာအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ တော်တော်များများ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေက အရမ်းရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်။ တစ်ချို့ ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ဘဝတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်သွားမလားဘဲ.. ကပ်သီလေးလွဲသွားတဲ့လူတွေရှိသလို တကယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အယုံလွယ်တော့ အခွင့်ရေးသမားယူချင်တဲ့ကောင်တွေအတွက်တော့ […]
သူ​နေနိူင်​တယ်​ဆိုကတည်းက သင့်​ကို မချစ်​​တော့လို့ သူ့စိတ်​ထဲမှာ သင်​မရှိ​တော့လို့ပါ။ သူတစ်​ကယ်​ချစ်​ရင်​ ပြန်​ဆက်​သွယ်​လာမှာ​ပေါ့… ♥—မချစ်​လို့ထားသွားသူက အသစ်​နဲ့သာယာ​နေ​လောက်​ပြီ၊ ဘာ​ကြောင့်​များ တမ်းတ​နေအုံးမှာလဲ??? သူ့လဲသူဘဝနဲ့သူ ကိုယ်​လဲကိုယ့်​ဘဝနဲ့ကိုယ်​မို့ သူ့အတွက်​အသုံးမဝင်​​တော့လို့… ထားသွားခဲ့ပြီးမှ ဘာအတွက်​​ကြောင့်​များ… ခံစား​နေရတာလဲ??? ♥—ကိုယ့်​ဘဝအတွက်​ အ​ရေးမပါတဲ့သူ​တွေအတွက်​နဲ့ အချိန်​​တွေကို အလကားမဖြစ်​ပါ​စေနဲ့! အချစ်​ကိုတန်​ဖိုးထားတာထက်​ အချစ်​ကိုမကိုးကွယ်​မိဖို့​တော့လိုပါတယ်…. ♥—ကိုယ့်​အချစ်​နဲ့မထိုက်​တဲ့သူက အ​ဝေးဆုံးကိုထွက်​သွားတတ်​ကြပြီး…. […]
မြမြစက်​ရုံ ဆန္ဒပြ​နေပီဗျို့ ​ကျောက်​စိမ်း ဖိနပ်​စက်​ရုံ (ရုပ်သံ)
မြမြစက်​ရုံ ဆန္ဒပြ​နေပီ ​ကျောက်​စိမ်း ဖိနပ်​စက်​ရုံ ရဲ့စိုးရိမ်​ရတဲ့အ​ခြေအ​နေပါတရုတ်​​တွေကမီးဖျတ်​ထားပြီး ယုတ်​မာဖို့ကြံ​နေကြပါတယ် admin- နေစဉ်ထူးဆန်းသောသတင်းများကို ကျွန်တော်တို့ MM Breaking News ကတင်ပေးနေသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Pageကို Like & See First လေးလုပ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ Crd #breakingnews —————————– […]
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်လာမည်ဟု သတင်းထွက်နေ…
နေပြည်တော်၊ဧပြီ ၂၆ တတိယအကြိမ် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်တွင် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ပြန်လွတ်လာမည်ဟုSpeaker ၏ သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရသည် ။ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ကို နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပုဇွန် တောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှမူးယစ် ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိသုံးစွဲမှု ပုဒ်မများဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင် ဒဏ် ၅ […]
နာဂစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် . .
နာဂစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် နာဂစ်မုန်တိုင်းထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင် တယ်လို့ မိုး/ ဇလ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက Opinion Leaders Media ရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “ လက်ရှိ သချာင်္မော်ဒယ်အခြေပြု စက်တွေရဲ့တွက်ထုတ်မှုအရ […]